Dareenkaagu Siduu Noqonayaa Marka Qof Aad Jeceshahay Uu Dhibsado Waxyaabaha Aad Caadeysatay Sida Arimahan Oo Kale. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Dareenkaagu Siduu Noqonayaa Marka Qof Aad Jeceshahay Uu Dhibsado Waxyaabaha Aad Caadeysatay Sida Arimahan Oo Kale.
Dareenkaagu Siduu Noqonayaa Marka Qof Aad Jeceshahay Uu Dhibsado Waxyaabaha Aad Caadeysatay Sida Arimahan Oo Kale.
Bulsha:- Marka hore waxa aan salaamayaa dhamaan bulshada ku xiran shabakada Allsiyaasad.com gaar ahaan shaaqalaha, bacada salaan.
Waxa aan doonayaa inaan ka hadalo arin aan jecelaystay in aan u soo bandhigo bulshada danaysa arimaha nolsha. Anigu waxan ahay wiil aan wali guursan hase yeeshe aad u baara ariamaha nolsha sida xiriirka u dhaxeeyay gabdhaha iyo wiilsha gaarahaan kuwa is qaba.
Waxa aan rabaa in aan ka qoro buuga waxyaabaha aan kala kulmay qaarkood oo igu yeeshay dareemo aanan filan karin.
Marka wiil iyo gabar uu xiriir ka dhaxeeyo ama kuwa isqaba ayaa mid wlaba wax uu Rabi siiyay dareen gaar. Iyo waxyaabo uu jeclaysan karo midkood oo kan kalena u ah dhib.
Tusaale dadka qaar ayaa marka ay hurdan khuuriya, dadka qaarna way qarwaan. Markaa labda qof ee nolsha isla qaybsanaya hadii midkood uu leeyahay calaamadahaas aya ka kale waxa ay u tahay dhib hadan. Taasna waa in aad u samirto waanan wax mid qasab ah.
Nin aan sxiibo nahay ayaan waxaan na dhex martay sheeko gaaban oo ku saabsan dhib soo kale dhex gashay isaga iyo marwadiisa. Sheekadaas oo ku saabsan nolsha ay wadaagayan.
Taas oo ah marka ay samaynay galmad in inta ka horaysa ay sameeyaan istiim, hase yeeshee mid ka mid ah labadoda waxa uu caada u ah in marka la is dhunkanayo uu dareenkiisu kaco, halka ka kalena aad u neceb yahay dhunkashada. Isaga qofkaas sabab uga dhigayo in uu afku casaanayo amse ay tahay dhaqan xumo ka timi halkaas iyo reer galbeeda.
Qisadan uu saaxiibksay iiga sheekeeyay ayaa waxay reerkii ku noqotay arin ay ku kale tagi karaan. Sababtoo ah marka laga hadlayo guurka waxa la isku guursanayaa waa sidii loo heli lahaa ubada iyo nolala raaxo leh. Inta badan marka laga hadalayo arimaha raaxada guurka raga ayaa inta badan u dhago nuglayn waa sida ay aniga ila tahay.
Gabdhaha soomaaliyeed waxa lugu tiriyaa dumarka aduunka u nadaafad badan way yar tahay in aad aragto naag ninkeeda marka ay raali galinayso in ay sidii ay ahayd ugu timaado halka ragnaa qaar sigaarkii iyo qaadkii ka soo urayo.
Hadii aan ku soo noqdo qisadan yar waxan saaxiibkay ku booriyay in labda qof kan diidaya in waxa uu jecelyaha ka kale loo sameeyo in uu usabro. Waayo, raaxada wax ka fiican ayaa meesha ku burburayay oo ah ubadkii dhalan lahaa.